Tenga 18 Teabags Slim Green Kofi NaGanoderma - Kutakura Mahara & Hapana Mutero | WoopShop®
ruvara 1 Bhokisi 1 Bhokisi 2
1 Bhokisi 1 Bhokisi 2
18 Teabags Slim Green Kofi NaGanoderma - 1 Bhokisi yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Name: 18 Teabags Slim Green Kofi neGanoderma
Zvisungo: Instant kofi, girini girini mushoma, girini tii mushoma, garcinia Cambogia mushoma, guarana mushoma, ginseng mushoma, Ganoderma mushoma, lotus mashizha mushoma, L-Carnitine mushoma.
Kurema kweNet: 180
divi: Tora 2 ~ 3 Sachets Mazuva ese
Kofi yedu yakasvibirira yakasvibirira inosanganisira chaiyo 100% yemakwenzi echisikigo, senge bhinzi yakasvibira yekofi, Ganoderma howa Ginseng yakaburitswa inosimudzira kurwisa-kuneta, kuvandudza hutachiona, metabolism, nezvimwe kuti uwane hutano hwakanaka. Zviwanikwa zvakaita seLotus Leaf Extract, Garcinia Cambogia Extract, uye L-Carnitine inogona kudzora iyo nzara mahormone kudzvinyirira nzara inoderedza kudya kwekoriori. zvinhu zvinoderedza kuwanda kwemafuta, mhanyisa kupisa mafuta, bvisa kufutwa kwemafuta, uye kudzora huremu zvinobudirira.
Kofi yakasvibirira inosanganisira yakakodzera 100% miriwo, senge bhinzi dzegirini, Ganoderma mushroom ginseng yakaburitswa inosimudzira kurwisa-kuneta, kuvandudza hutachiona hwemagetsi, nezvimwe kuwana hutano hwakanaka
Lotus shizha rinobviswa, Garcinia cambogia mushoma, uye L-Carnitine inogona kudzora iyo nzara mahormone kudzvinyirira chishuwo kudzikisa koriori yekudyiwa
Inogona kudzikisira kusanganisa, kumhanyisa kupisa mafuta, kuvharira kunwa kwemafuta, uye kudzora huremu zvinobudirira.
Isa 1bag mukapu.
Dururira mumvura nyowani inodzika uye sanganisa hupfu mushy mamiriro kwemaminitsi 3-5.
Nakidzwa nazvo sekudya mangwanani kana manheru.
Chinhu chakasvika nekukasira chete kwasara matanga Ndatenda
Ndanga ndichishandisa chigadzirwa kwemazuva matatu atova mhedzisiro yacho inooneka ..
Ndakaguta. Ini ndichaiyedza uye ndipe yangu yakajeka ruzivo